Kacaankii Barakaysnaa Ee 21-Ka Oktoobar 1969: Oktoobar Waa Tee?, Waa Taayadii. « HiilDan.Com
Home › Warka (News) › Kacaankii Barakaysnaa Ee 21-Ka Oktoobar 1969: Oktoobar Waa Tee?, Waa Taayadii.
Kacaankii Barakaysnaa Ee 21-Ka Oktoobar 1969: Oktoobar Waa Tee?, Waa Taayadii. By hiildan on October 20, 2012	• ( 78 )
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« Ku Nasta Heesta Todobaadka Oo Ay Inoo Soo Xushay Haboon-Deeqa, Oo Ka Mid Ah Bahda HiilDan: Waa Boqoradii Codka Ee Magool(AUN).Hambalyo Meher Farxad Leh: Nimca-Nuura Iyo Maxamad Cabdi Oo 21kii Oktoobar Meherkoodu Ka Dhacay Ottawa-Canada »Categories: Warka (News)	Related Articles
Mr. Siilaanyo Thank You and Congratulations but Never Surrender Our Sovereignty	Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo Marti Qaaday Ugaaska Beelaha Gadabuursi.	Hodan C/Raxmaan Dheere, Waa Fanaanad Qaran, Oo Ay Dhaleen Fannaaniin Qaran: Maxaa Ku Jaban Hadday Ka Qayb Gasho Xuska 18-ka May?	Todobaadkan Iyo Sheekadii Ugu Hadal Haynta Badnayd UK: Dr Siilaayo, Xirsi, Dr Maxamad vs Jaalliyada Awdal UK	Maanta Waa Maalin Khayr Badan: Soo Dhawoow Ugaas C/Rashiid	Professor Axmad Ismaaciil Samatar: CANARY IN THE COAL MINE (Somalia)	78 replies	»
hiildan	October 20, 2012 • 22:39	SSDF IYO SNM HA DHACAAN, SIYAAD BARRE HASOO NOOLAADO. Cadaw shisheeye oo caradayada yimaada waxa noo jabiyay Majeerteen iyo Isaaq.
Reply ↓	Galbeedi	October 20, 2012 • 23:09	waa markuu hiildan yara waalan jiree kolay caanihii kaacankaad ku kortee ciise maxad ku ilawday????????????
cala kuli xaal socon mayso isku soo bootadii buule burde iyo bule xaawa barigaa waxad wadeen sheekadii abgaal ka maah maahay ee marna risaaq marna rashiid inta kale ma rootibaa walee tariikh baad isoo yara xasuusisay hadab xilka wala wayn bula xaawa haysee buue burde ha boodaalaysato oo buurta ha gasho down faqashta iyo intii daba socotayba
Reply ↓	hiildan	October 20, 2012 • 23:13	Galbeedi, waxaynu joognaa curashadii kacaankii barakaysnaa, ee Isaaq ilbaxiyaye, dee maxaad ugu dabbaal degaysiin?. Anaga hal wasiirba namuu dhaafin, idinku imisaad ku lahaydeen?. Wadanimaa laysku dhaafay.
Reply ↓	Timacade	October 20, 2012 • 23:25	Hiildanow……inadeer caawa dhiiga ha igu kicin afweyne ibtilo ka xumi somali masoo marine……
Reply ↓	hiildan	October 20, 2012 • 23:28	Dr Timacade
I am afraid, Gen Siyaad Barre, was my hero. Long Live 21 October.
Reply ↓	Galbeedi	October 20, 2012 • 23:30	ilabaxnimooy xaal qaado
gunimo dhereg leh gobanimo gaaja leh baa ka roon kacaankiina gacantayda baan iskaga qaaday maanta xamdi baan taaganahay inkastoon ana kaacan kale maanta aan wado kolay kaacan ku daba fayl baad ahayde iskaga kay daba fayl hiildan oodi ab ka dhawe waadigan u sacab tumayay nin buule xaawa ahe maxad ku diidan tahay in aad u sacab tunto nin aad waxwalba wadaagtaan abti,ilmaambti gacal iyo ayeey wali waa su aalahaan jawaab u laayahay
Reply ↓	gudoon	October 20, 2012 • 23:35	i wish in kacaankii barakaysnaa soo noqon lahaa somalia dowlad bay laheed aduunku tixfaliyo laga danbeeyo somali waxbadan ayayna haysan ee wadan dhisan oo sharci shaqeeyo oo pasport sharaf leh lagu faano baan laheen somali mid bay aheed wadanka lama kala laheen halkaad doonto bad ka dagi jirtay somalia qabiil ma jirin ha jiree laguma shaqayn jirin ,markii wax ilahay nacdalay cadowgu hub noogu soo dhiibay bay wax walba kala dhaceen wadankii burburay 1.000.000 million oo somali baa dhimatay wax bada ku dhmada wax bahalo cunaan ,waxaaso dhan waxa la waydiin jabhadii hubaysnaa ee cadowga ithoopia soo hubeysey if iyo aakhiro wixii somali dhib soo gaadhay kuwaasa ka masuul ah maalin ay noqontana waa lala ixaatami ama kuwii danbigaa somali ka galay masuulka ka ahaa baa lala xisabatmi ama caruurtooda aan dhalan wali baa lala xisaabtami doona maalin baa iman doonta danbigii ay somalia oo dhisan ka galeen laga gooyo , somalia maantay ugu fiican tahay wayna dhismaysaa ilahoow22year is enoght ee somalia u gargaar oo cadowga umada somalyed naga qabo,,
Reply ↓	hiildan	October 20, 2012 • 23:37	Galbeedi,
Kasoo fikir una qaado Laylis Guri(Home Work): Adigu gunnimo dhereg leh, oo ah in shisheeye kuu taliyo, maku doorsan lahayd gobanimo gaajo leh, oo ah inaad iskaa u noolaato, adigoo xor ah?
Reply ↓	Timacade	October 20, 2012 • 23:40	Hiildanow……dinner baan u socday hadda, lakiin apetit kii xitaa wuu iga tegay markaan maqlay magaciisa. Waa inoo barito…..
Reply ↓	Timacade	October 20, 2012 • 23:43	Gudoon….waan ku salaamay, walaashay….
Reply ↓	Galbeedi	October 20, 2012 • 23:45	maxaan uga soo fikiri jawaabtu waa maya lkn ha i odhan waad i haysataa borama nin laa u doobiyee
Reply ↓	hiildan	October 20, 2012 • 23:48	Dr Cirro
My favourite dish is FISH and CHIPS with black coffee, do they do that in America?. Long Live Siyaad Barre..¬!
Reply ↓	gudoon	October 20, 2012 • 23:57	tima cade wan ka qaaday walaalkiis.. wax dhaama siyaad ma haynaa ilahay ha u naxariisto ,,reer xamarku waxay ku ducaystaan ilahaw kacaankii iyo dowladii noo soo celi somali oo dhan baa ku ducaysaynaysa dowladeeni school from gtade one to university free ahayd waxbarasha aduunka horow maray waxbarashadu waa lacag inaga free buu ka dhigay siyaad,,
Reply ↓	Timacade	October 21, 2012 • 00:14	It is french creole ” cajon food” Tonight. Dishes from the only french colonial region of the united states ” Louisana”.Lakiin dee maraykanku cunto uu leeyahy ma jirto, waa burgers and fries…..similar to the fish and chips….bon apetit….
Reply ↓	Timacade	October 21, 2012 • 00:29	Gudoon…… Huuno aniga dictator la ima tusi karo. I rather live under iblays than a dictatorship.
Reply ↓	Marunbaa	October 21, 2012 • 00:38	Timacade, hadaan fikirkayga dhiibto hadaa la i odhan ma dadkaad ka aqli badan tahay balse waxa i dhiba marka Somalidu ay kal saari waayaan xaalada u baahan in aqli iyo xigmad lagaga jawaabo balse muxubo iyo xasuus gaara ay kaga jawaabaan iyaka oo xaqiiq u arkaya. Siyad Bareh wuxu fursada helay xili gumaysi laga soo baxay wuxuna ka faa iidaystay qiiradii somalida waxase nasiib daro ah in ay inagu yartahay critical thinking analyses. Waxan hubaa wakhtiga Siyad Bare fursada helay, iska dhaaf ibnu aadame in Dameerna qadarin ku heli lahaa. What did he do right? what did he do wrong? What could have been us today if he was not been there and what legacy did he leave behind? When one reads the history of Ibrahim Lincoln, George Washington, Pearson of Canada or even the Winston of England and still being criticized one wonders why this demon by the name Sayid Bareh deserved to be called a Hero. I guess I better not to voice my view.
Reply ↓	gudoon	October 21, 2012 • 01:36	siyad bare was a hero ,, wadani jecel wadankiisa dadkiisa dhisay ciidankii africa laga baqi jirtay he was my hero in taalo loo diso buu istaahila about the dictator africa oo dhan madaxdooda kama dagaan madaxwayne oo dhan wuu jecel yahay in aanu ka dagin jagadaa ,maalin biil clinton la waydiiyey ma sii joogi lahed marku 8 sano ahaa madaxwayne ayuu yiri hadii la ii ogolon lahaa waan iska sii joogi lahaa isagoo qoslaaya,markaa siyaad wasnot bad ilaa intii aan jabhaduhu samaysmin somaliyana waa laga baqi jirey ka hor intii aan somali la isku jabin,, timacade it is week end enjoy the dinner,,bye
Reply ↓	Marunbaa	October 21, 2012 • 04:06	Gudoon, waligaaba dhagar qabe bakhtiyey u oy. Cida ciyaalkuu ahaa miyaa?
Reply ↓	Aisha	October 21, 2012 • 08:39	Oktoobar, Oktoobar waa daruur hilaac dayoo somaali u da,a dee
xoogiibaa dilaacay Oktoobar
xukunkii dalka haystay Oktoobar.
ahalaha unaxariisto Maxamed Siyaad waxa hadaladiisii kamid ahaa,waar xaarbaan kufadhiyaaye hadaan kursigaa kakaco urtiisu aduunkoo dhanbay gaadhi. miyeyna soomaali qadhmuunkeedii aduunkii oodhan gaadhin welee soomaali nin lamidihi kuma jiro soona mari maayo.dhulka soomaalida oodhan marka laga reebo awdal laamiyuu kawada dhigay anaka intuuna nasoo gaadhin bay xaasidkii ku kaceen soomaalidu warshedo waxwalba soosaaray lahaayeen beeray lahaayeen quf bilaa shaqo ihi majirin dawlad adag oo sirteeda loo dhaadhici karin bay ahaayeen baasaboorka soomaalika aduunka meeshaad doontaad kutegi jirtay tigidh uunbaa kuu hayey haye maanta maxaad haysaan?
Reply ↓	Xariirad	October 21, 2012 • 08:42	Halkan ka daawo video xasuusta wax badan dib u celinaaya oo aad ka ogaan doonto sida uu ahaan jiray wadankaagu waqtigii kacaanka barakaysan adiga oo ka bogan doona ciidankii xooga dalka somaliyeed sida ciidankii bada,dhulka iyo cirka.Waxa kale oo kuu dheer quruxdii diyaradahii Somali airline iyo wax yaabo kale oo wax badan ku xasuusin doona ayaa buuxa halkan daawasho wacan.
Reply ↓	hiildan	October 21, 2012 • 11:52	Tawradatan Barakaysan, Tallaabadii ad qaadeen, Tamar iyo taagba garabkiinaan taaganahay. Alloow tawradii oo kale dib u soo celi.
Reply ↓	Galbeedi	October 21, 2012 • 09:26	sidana siyaad jacaly mahee ma ubixii kacaanka meesha maraya baroortu orgiga ka wayn wadu dhisay waxbarshadaa bilaash ahayd wuu nagu soo socdee dhexdaa loo galay askarigaa yar haduu hada joogi lahaa geelbeedi xilka noogu dhiib baa ka dhici lahayd
Reply ↓	Abdihamid	October 21, 2012 • 09:27	Horta Kacaanku Markii hore aad ayaa loogu sacaabtumey loogu sacab tumey, Lkn markii dambe tii ka dhacdey Waa la wada ogaa. Haday Dadla dilo tahay, iyo hadey Diinta oo lagu xadgudbo tahayba.
Maantana lama odhankaro Siyaad Barre geesibuu ahaa, oo Somalia isagaa dhisey isagaana Burburiyey.
Jabhadihii Degaalamayay ee iyaguna Wadanka Burburiyey, ee Shisheeyaha soo kaashanayayna Farbaa ku godan oo waa iney Qirtaan.
Markaa Wixii dhacay wuu dhacey ee in la iska Ilaabo oo Cidwalbaa halkeeda ilaashato ayuunbaa maanta dantu ku jirtaa.
Wakhtigana yaan la isaga Ridin Siyaadbarre wuu xuma ama wuu fiicnaa. That’s all.
Reply ↓	Xariirad	October 21, 2012 • 10:04	Reply ↓	Haboon	October 21, 2012 • 10:14	Reply ↓	Aisha	October 21, 2012 • 10:34	balhalkan iga caawiya ninka bbcda u waramaayi maalintii siyaad dalka qabsaday ma wuxu yidhi dalka somaliland isagoo markaa soomaaliya oo dhan u jeeda mise waa dhegahayga bal hada ii dhaqsada waaban yaabeehttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cAht_wtXDU8
Reply ↓	Aisha	October 21, 2012 • 10:35	Reply ↓	Aisha	October 21, 2012 • 10:39	tanaa la maqlayaaye dhegaysta
Reply ↓	hiildan	October 21, 2012 • 11:43	Heer Sare, CAASHA, waad iga farxisay.
maanta waa laba ciidood oo isu beegmay, Midda Koowaad Xajkiibaa la joogaa, waa bishii ciida. Midda labaadna waa Kacaankii Oktoobar oo soo laba kacleeyay. Anigu KULMIYE iyo KACAANKABA waan taageersanahay, maxaa yeelay, dee Siilaanyo waa ardaydii Kacaanka Oktoobar ee Jaalle Siyaad. Hambalyo 21-ka Oktoobar Hambalyo.
Reply ↓	hiildan	October 21, 2012 • 11:46	Thank You Xariirad….. Hambalyada Oktoobar iga gudooma
Reply ↓	HanniMuufo	October 21, 2012 • 12:30	Salaan sare dhamaan,
Ani ahaan Dowlada Siyaad Bare waxay iila muuqataa mid dishay jiritaanki umada Somaliyeed gebi ahaan!. Heesaheedi qurxonaa iyo hubkeedi faraha badnaa hooga maanta yaalbaan ka dhaxalnay!. Way na dhalinhabaabisay walidkeey ayey breinwash ku samaysay… Dagaal aanay shuqul iyo afare ku lahayna way gelisay oo gaysay iyagoo tuute xidhan Godey iyo Jigjiga…….. Iyagoo xogaa waal walan baa la soo celiyey iyagoo A war veteran ah kadibna lagu hulmaamay meshoodi dood iyo buuqna sii galeen iyo iyagoo gaar laga qabto oo dhaqalahooda la wardiyeeyo. Waxan kusuustaa iyadoo ruuxi askari ahan jiray aanu xita guri sara dhisan karin oo lagu eedeynayo xatooyo xoolo dowladeed!. Inkastoo lacagtu wadooyinka iska buuxday oo hadad ganacsi yar samayso iska heleysay!. Hadana waa in aad busarad ahataa hadii kale waxbaad xaday!. Dad aanan la garanayn meshey ka yimadeena xaafado kuwa Hollywood u eg dhisan jiray marka kala sarayn bay abuurtay oo isku dirtay dadkii Somaliyeed…….! Inkastoo abahay oran jiray afwayne masuul kama ahan waxane waa badaawinta qabiilkiisa ah hadana haduu courupt dareemay wuu is casili karay intay goori goor ahayd!. Arintu si walba ha ahatee R.I.P Jaale M.S. Bare. Waa uun tariikh aanu inagu leenahay 21 oktober inagoo wada jiraa dhisnay markay na anfici waydayna inagoo wada jiraana duminay………!. Waxaan xushmad gaara siinayaa dhalinti difaaca dalka Somaliyeed http://www.youtube.com/watch?v=302DC44J8LA&feature=related
Waxayse dhaxleen sidan in aay difaac dal aan dhamaad leheyn galaan oo ubadkoodi na difaac galaan dal la difaacayo oon dhamaad lehayn!. In aay difacaan dhib la abuuray oo proxy ah… in aay dhigooda marwalba daato oo dagaal afka loo geliyo aaney micnihiisa fahmi karin. Kaliya ay u jidaan cadaw ka soo horjeeda sababtuna aanay u cadayn!
Reply ↓	HanniMuufo	October 21, 2012 • 12:38	Dagaalo aan weji lahayn oo la abuuray!.
Reply ↓	HanniMuufo	October 21, 2012 • 12:57	Hiildan runtaad ka sheegtay hahah,
Cajiib in Siilaanyo iyo AUN Siyaad Bare waa is leeyihiin saa couroption koodaad ka arki iyo kala dilka umada……. iyo dagaalo sokeeye, musuqmaasuq iyo dowlad dhalinhabaabis ah kkkkkkkkk Allah yaa cisag in geed dhacankii dhalo. Berina Boolida Qaran ee Burco sidi tii Muqdisho la bililiqaysanayaad arki saa kala sarayn bay abuurayaan. Midna glas huis ku dhisayo mucawino iyo canshuuro. Midna suuqyada ku balanbalayo……..!.
Reply ↓	HanniMuufo	October 21, 2012 • 13:24	1977 / 2012 proxy warfare in Somali Army….!.
Reply ↓	diiriye	October 21, 2012 • 13:30	hani iyo hiildan
inkastoo aad ku kala aragti duwantihiin fikirka ku wajahan kacaankii hadan waxaad ka istaaq furaysaaan in siilaanyo wato habdhaqankii siyaad ama ardaydiisii,
miyaanad ogayn in siilaanyo maalin cad iskaga baxay malcaamadii siyaad markuu arkay in shiikhu aanu waxa uu meesha ku hayaa somalinimo ahayn oo xilkii uu hayay ka doortay inuu geed hoostii iyo galab carawgii snm ku biiro,
HANI, maxaa burco lagu dhisay ee aad sheegaysaa miyaad yara boodaa mise saarkii abgaalka ayaad ka dhex aragtay burco
Reply ↓	Marunbaa	October 21, 2012 • 14:12	Hani, reer boorama war fiican baad siisay balse waxse maku qaadan karaan. Marlay qolo nacayb iyo ku jiqsiibay ka tahay ee mid aan askari mareexaanihi gurigooda ku dhax dhirbaaxini ma jiro. Siyad Bare, kurisga amaana kuma helin, amaana kuma xukumin amaana kagama degin. Xamar iyo meeshuu xilku yaalay ma tagin balse xumaantiisa Saylac iyo inta hargaysa u dhaxaysa waxaan ku arkay igaga filan caruur nimadi, da markii la loqday, dee doqon baan dhirbaaxada daanka walaalkeed ku yaal garawsan. Brain wash ka aad sheegaysaana dee waaba ka muuqda, Hildaan, Aisha iyo Hildaan. Waxad kalood ku saxsan tahay Siilaanyo xukun kiisa iyo geel jiraha ku hareeraysan een xigmad iyo xirfad midna lahayn balse Siilaanyo horow marka somaliland waa dhex ka weerar dhaxdana wuu kaga bixi doonaa oo waxba kama sheegan doono.
Reply ↓	Marunbaa	October 21, 2012 • 14:16	Waar ninkii Darbi ma Sahal iyo Durkiyaa biil u qoray sidani si maahee. Halkuu ku danbeeyey. Hildaanoow ninkii Darbi warka keen?
Reply ↓	Sahal	October 21, 2012 • 14:26	Siyaad Bare Alle ha u naxariisto lkn wax amaan ah iyo wanaag ah oo uu ifka kaga tegey la heli maayo.
Buur dahab ah haddaan dhiso oo intaanan god galin gacayteyda ku dumiyo dee sow xataa ka aan waxba dhisin kama liito?
Siyaad Bare hadduu in yar oo damiir ah iyo u damqasho soomaalinimo leeyahay kuma uu dhegenaadeen xukunka ilaa Viila Somalia lagu garaacey ee markuu arkey in shicibkiisii ka sii jeesteen ayuu cid kale talada ku wareejin lahaa.
Calaa kuli xaal, aniga aragtideyda godka dheer ee ay somali ku dhacdey Siyaad isagaa masuulida koowaad leh ee ninkii NOSTAGIC kacaan hayaa waa yeelkii.
Reply ↓	Sahal	October 21, 2012 • 14:32	Marunbaa
Walaahi ninkaas haddalkiisii u dambeeyey nin mashkaladi soo foodsaartay ayuu u ekaa ee ha laga wardoono haddii ay jirto cid warkiisa heli kartaa.
Anigu haddan biil u qoran dhiig Reer Nuur ayaa igu jiree Durkiyase kkkkkkkkkkkkk duulkaas ma, isagaa u diirnaxaaya.
Sobob aan iskaga gubeynaa nin yemen ku qayilayaana meesha kuma jirin.
Reply ↓	Marunbaa	October 21, 2012 • 14:52	Gudoon, Hiildaan iyo Aisha. Waakan xaakim kiinii xilka xukunka fiicnaa waana dhibta ugu yar ee uu somali ka galay.
Reply ↓	joogiwaa	October 21, 2012 • 16:01	xariirad iyo hiildan
maanta meel cidla aan sidii shiicada xabadka iska tumayaaye
mala ii helayaa heestii baxsan
arimihii dalkeena la abaabulyeey
oo baryadiyo amaahda iska diidnayeey
allaa magane gaajoonayeey
hadii laii helaayo mahad baan idiin hayaa
Reply ↓	Carraale	October 21, 2012 • 15:41	Timacadde, Galbeedi, Marunbaa, Sahal iyo inta la fikirka ah ee aan ka midka ahay, waxba ha ka soo qaadina maanta oo kale, Hiildan iyo xulafadiisa. Hiildan sidaa qoraaladiisa ku cad wuxuu ku indha baraqsaday Siyaad Barro doobinaya oo Heesoo kacaameedkii iyo kooxdii Waaberi idaacadaha radio Muqdisho iyo Radio Hargeysa ka dananayaan, sida heesta tidhaa: Tawradatan Barakaysan, Tallaabadii ad qaadeen……
Waxa la ogaaday daka heesaha iyo umuuraha caynkaasoo kale ah ku ababa ee ku indho-baraqsada inayna wax kaloo dhami marin. Waayo, maskadooda ayay qol xasuustaa si gaar u shidaa ka samaysamaa. Markaa, markay maqlaan heesihii ay ku indha baraqsadeen ama ay xasuustaan waa ay qiiroodaan oo ay jidhidhicoodaan. Waana nooc saararka ka mid ah. Markaa Hiildan Saar Kacaan ayaa haya. Markay ku kacdoo saaxiibkeen u tuma ,oo heesaha kacaanka u saara,oo ugu roonaada, balse ha la doodina. Arrintu dood ma taagna ee waa saar saarid iyo wax la mid ah.
Reply ↓	Carraale	October 21, 2012 • 16:05	***** Sixitaan *****
Timacadde, Galbeedi, Marunbaa, Sahal iyo inta la fikirka ah ee aan ka midka ahay, waxba ha ka soo qaadina maanta oo kale, Hiildan iyo xulafadiisa. Hiildan sidaa qoraaladiisa ku cad wuxuu ku indha baraqsaday Siyaad Barro doobinaya oo Heesoo kacaameedkii iyo kooxdii Waaberi idaacadaha radio Muqdisho iyo Radio Hargeysa ka dananayaan, sida heesta tidhaa: Tawradatan Barakaysan, Tallaabadii ad qaadeen……
Waxa la ogaaday dadka heesaha iyo umuuraha caynkaasoo kale ah ku ababa ee ku indho-baraqsada inayna wax kaloo dhami marin. Waayo, maskaxdooda ayay qol xasuustaa si gaar u shidaa ka samaysmaan. Markaa, markay maqlaan heesihii ay ku indha baraqsadeen ama ay xasuustaan waa ay qiiroodaan oo ay jidhidhicoodaan. Waana nooc saararka ka mid ah. Markaa Hiildan Saar Kacaan ayaa haya. Markay ku kacdoo saaxiibkeen u tuma ,oo heesaha kacaanka u saara,oo ugu roonaada, balse ha la doodina. Arrintu dood ma taagna ee waa saar saarid iyo wax la mid ah.
Reply ↓	Timacade	October 21, 2012 • 16:09	Dee intii aan hurday baa hadlkiiba la dhameeyey. Runtii anigu intii aan ka odhan lahaa siyaad barre, hannimuufo ayaa ii tiri. Waxa kalia ee aan ku darimlaha:
Laba iyo labaatankii sano ee uu wadanka haystay, wareegto ayaa lagu xukumayey, single government institution lama
dhisin, waana sababta ay somalia degdega ugu burburtay. Siyaad barre markuu lahaa xaar baan ku fadhiyaa sida ay Aisha sheegtay dee xaarkiisii uunbuu ahaa, waana xaarkiisii waxa ila hadda somalia ka urayaa. Bal kasoo qaad in your own families, haddii aad ilamaha aad dhashay aroor walba wixii madaxaaga kaaga soo dhaca aad u sheegto oo aad u dhigi bari weydo akhlaaq iyo asluub ku salaysan dhaqanka iyo diinteena suuban, sideed u malaynaysaa inuu noqonayo ilmahaasi markuu labatan jirsado.
Siyaad barre fabric gii ummada somalia ayuu jabiyey, waxana ka caawiyey, guulwadayaal iyo kuwa aan aqli badan lahayn oo badankoodu sacabka uun tumaayey.
Qofka kaliya ee Qaladkii uu somalia ka galay si raganimo iyo daacadnimo ah u aqbalay waa ” cisman kaluun”, oo wasiir ka ahaa somalia mudadii u siyaad barre madaxweynaha ahaa. Cismaan kaluun inkastoo aanu dhagar galin, kana qayb qaadan muaamaradka laga gumaadayey somalida, haddana waxuu aqbaly inuu ” incompitant” ay somalidii u shaqaynaysay siyaad bare ahayd. Please haddii la heli karo videoga uu arrintaa kaga hadalyo halsoo galiyo meesha.
Arrinta u dambaysa ee aanan ku cafinayn siyaad barre iyo xulafadiisa dee waa waxa uu waqooyi ka sameeyey. Siyaad barre milyan dad ah ayuu bara kiciyey, xasuuqay, guyahoodii gubay, uu xadka ka talaabaiyey. Dadka qaarki waxay ku doodaan dee SNM ayuu wadanka ka ilaalinayey. Waa hadal aan u qalmin jawaab, lakiin jawaabta ugu fududi waxa weeyi at whose expense. Cid xaq u lihi inay shicib diyaarado kusoo kicisaa ma jirto xitaa haday iblays la saftaan. Waliba anigu waxan rumaysanahay, siyaad baare inuu isku dayey inuu geopolitics ka wooqooyiga bedelo, oo uu darood soo dejiyo dhulka laga baro kiciyey isaaqa.
Ilaahay uma naxaristo isaga iyo intii kaalisayba….good ridence
Reply ↓	Marunbaa	October 21, 2012 • 16:13	Caraale, that was stoically hilarious.
Reply ↓	Carraale	October 21, 2012 • 16:19	Marunbaa, Thanks bro.
Reply ↓	hiildan	October 21, 2012 • 16:41	Joogiwaa Ciid wanaagsan
Waan soo raadinayaa heestii baxsan. Intaa ka hor, waxaynu khacaankii barakaysnaa ugu dabbaal dagaynaa, heestan macaan iyo hablihii hobalada waabari, ee kusoo barbaaray kacaanka.
Reply ↓	Xariirad	October 21, 2012 • 17:24	Joogiwaa
Anigana tanaa kuu hayaa Waa geeshkayagow guulaysta iyo fanaaniintii Wabari oo Baxsan Ka Daba Jiibinaaya.
Reply ↓	hiildan	October 21, 2012 • 17:25	AISHA,
Wariyuhu wuxu yidhi dalka SOMALILAND, isagoo u jeeda Somalia oo idil..kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Somaliland horeaybay u baxday, waa midda an rabno, ee ma aha middan imika hal qabiil sheeganayo.
Reply ↓	joogiwaa	October 21, 2012 • 18:54	hiildan iyo xariirad gurmad waad u gashen inaad ii muraad bixisaan waa mahad
dhalinta soo ciyaar gudayn waxaan leehay faataxada haloo maro dhamaan intii halyay dalka u dhimatay ooaabahay ka mid ahaa
allahaw nxtee aabahay wuxu kamid noqday gurmadkii lagu badbaadinayay dadkii soomaaliyeed ee ku tabaaloobay abaartii dabadheer oo qof walba ku dhacay alkuuku noolaa qarfe iyo buur
si meel laga daad gureeyo loo gaadhsiiyo waxaa la adeegsanayay
dhabarka iyo dagta askarto xooga dalka
aabahay isagoo wiil yar dagta ku sida waqti habeena waxa qaniinay mas isagoo suntii la liita wiilkiina sida waxu soo gaadhay xarumihii kaalmada laakiin waa u geeryooday qaniinyadii
geeridii waxa na soo booqday mdaax sar sare hooyadayo wuxuu siyaad bare gacantiisa kau gudoon siiyay jaa isodii aabahay ooaah geesi dalka u dhintay noloshadiina waxbaa iska badalay
waxayse dhamayay 91kii hooyacay waxay aqoonsigii aabahay ka hadhay ka hor gatagtay dawladii ina cigaal iyadoo rabta in wiilasheeda qaar loo shaqaaleeyo waxayse noqotay habar xiddigihii faqashta sidatawiilasheeiina hada waxaa naanays u noqday kuwan aabahoodba isogoo nin habar jecl ah xanbaarsan buu dhintay oo naf male dee bal gar yaqaan timacadoow gacanta nala soo galiyoo yaa mudan in la karho l
Reply ↓	Ali-Durgiye	October 21, 2012 • 18:17	Hadba haad kici weeyee xaaladda soomaaliyaa,Siyad Barre 10-kii sanno ugu horeeyeey ee u xilka boobay marka laga reebo khaladkii ugu weyna ee u ilaahay iyo diinta islamka ka galay wax lagu haysan karo ma jirto,laakiin 1980 wixii ka dambeeyeey waxaa seegtay in u kursiga iskagaa ordo isku soo wada duubo Siyaad Barre wuxuu yahay geesi marka la barbardhigo waxaa maanta noo muuqda.
Hiildanoow ninba dookhi ciyaaryee ana ii daar heestii saado Cali ee ahayd;DHAMAAN REER WAQOOYI AAWAY iyo sababtay saado maanta Hargeysa uga tahay tuke cambaarleh!!!!!!!!!!.
Reply ↓	HanniMuufo	October 21, 2012 • 18:24	Timacade,
Waxan filayaa in kani yahay hadaladii Kaluun…Waa ruux wanagsan. Asxaabta ciida leh ee maanta kacankii u dabaldagaysa waan ini fahmi karaa waa caadi adanuhu wuu kala fikrad duwanyahay no hard feeling. Aniguba waan ku digriyaa heesihii kacanka lakin dee waxay ahayeen illusion nala ga dhadhiciyey oo aad u qurux badnaa. Hanaan loo bogi karo iyo quwad muuqatay ahayd lakin waxay ahayd Dhalinhabaabis ama onkod beena……….!. Heestani waa Eeboow mahadaa anigu laftigaygu waan jalbodaa heesaha qiirada iyo quruxda leh lakin waxan ugu riyodaa mustaqbalku in tani dhabowdo oo aanay noqon illusion!
Somalia ha nolaato cadawgeeduna ha jabo………. eebeheyna riyadooda run howga dhigo wada jir iyo midnimo…….. anigu waan ku riyodaa koleyba.
Reply ↓	HanniMuufo	October 21, 2012 • 18:30	Hiilka,
Ani in aad spam ka igu tuurtad go’ansatay kolkan Kulmiye iyo Kaacankii isla meel dhigay!…….
Reply ↓	mustafe	October 21, 2012 • 18:38	Marxuum siyaad Bare taariikhda Soomaalidu galey wanaag iyo xumaanba waa laga xusi karaa hadii dhinac la iska dhigo dhinaceyga wuxu ka ahaa kama aheyn dhinacaaga. Marxuum Barre wuxu ahaa nin jiboodey oo ismoodey inuu aduunkaba kaligii ka joogey. Dhinaca wanaaga xiliguu joogey wuxu dhisey ciidan tayo leh oo difaacilahaa soomaaliya, afka Soomaaliga oo isna taaba qaadey isla xiligaas. Markaa dadaaladiisii waxa baabiiyey aniga cid aan aheyni nin maaha. Ninkastoo isbida inu dunida kaligii kolba koobku soo shubo maalinbaa gab lagasiin. Markii danbe dhaqankii Soomaaliga ahaa ee soo jireenka ahaa dhulka la galey. Madaxda Soomaalidu ma aaminaan dad aan kasoo jeedin jufadooda. Markaa iyagaanku dileyn daraadeed wey wada dalaceen oo guutooyin guudka ka wada guduudanba ilaalini jirey.
Qarankii Soomaaliyana wuxu iskugu biyo shubtey reer Cabdule, mareexaan. Arinta aanla yaabeyna waxey aheyd odhaahyada xiligaa la iishegey iney baxeen bixiyeena haweenka Soomaalida qaarka mid ah sida MAGACUBA IDEEQ MAREEXAAN HADAAN UDHAXEY.
Wanaaga ugu badan ee uu siyaad bare sameeyey maaha wuxuu dhisey ee waa wuxuu dhisey iyadoo dhinsana ka tagey taasina waa Magaalada Muqdisho oo iyadoo camiran iskaga baxey dee maxaa ka danbeeyey xiljaceyn Soomaalida oo Hawiye isku dhexbaacsadaan. Taasi waa ta kala saartey in soomaalidu wadaniyadoodu tahey qabiilka.
Reply ↓	Haboon	October 21, 2012 • 19:10	Joogiwaa
Halkaa ka eeg heesta saynab
Aleylehe eeboow mahada
Reply ↓	kaydo	October 21, 2012 • 20:57	anigu waxaan qaba inkaarta Somaliya haysata wa tii culimada malin caad lagu toogtay xaqdaro
marki xaqa ay ka hadleen oo ay difaceen dinteena sharafta badan allah dhamantood janatul fardoussa ha ka warabiyo
marku laha duqu dumarka iyo ragu way simanyihin
si geesinimo leeh ayay uga dhidhiyeen masha allah waxayna ila tahay dalka in imtixaankaas laga gonayay ee illahay nabad waarta iyo dambi dhaaf ha uga dhiigo
ariin yar ma aheyn sababto ah culimadu wa awliyadi illahay dhigoduna dhiga umada kale lamid maha
subxaana allahhhhhhhhhhhhhh towbaaaaaaaaaaaaaaaa ya rabiiiiiiiiiiiiiiiiii
Reply ↓	HanniMuufo	October 21, 2012 • 20:50	Mustafe,
Hawiye isagaa victim ah oo in dhulka laga kacsado lana xasuuqo logu tala galay oo isaga laysku jebiyo hadana ilini kama dadanayso sida raga qarkii ama ma daba socdaan sharci iyaga loogu talo galay in lagu cuuryamiyo……… for ever rebels.
Reply ↓	Marunbaa	October 21, 2012 • 20:58	Joogiwaa, aabahaa ilaah ha u naxariisto balse geesinimada aabahaa magaca Siyad Bare kuma helin ee wuxuu ku hantay muxubadii gobo nima doonta ka soomaaliyeed qulubta cid kasta ku jirtay Siyaad Barane taas uun buu ka tuugaystay ee ma ahayn wax isagu uu alkumay. Wuxuu sameeyey oo kaliya in uu ka sinaystay. In ciidama somaliyeed oo quwadleh la dhisaana waxay ahayd mid ay dhamaan General ladii somalidu ka sinaayeen balse waxay rabeen in sinaan iyo somali jacayl lagu dhiso halka Siyaad bare inta dhaxda u joogsaday uu ugu tagri falay si shaqsi, si qabiil iyo si dictator ba.Xamar Siyad Bare xoolo mareexaan lama iman ee xamar hortii bay camirnayd. Iyadoo dhisan buu yimid inta uu dabsudhayna wuu ka haajiray. Siyad Bare hadii aanu somaliya dhaxda u joogsan oon daaroodna si gardaro ah ugu daba safan, maanta aduunka koowaad baan la tartami lahayn halka ka sadexaad aan daba xaabayno. Waa halkii Sahale, nin buurdahaba dhistay hadana dumiyey wax lagu amaano kama tagin. Aniga heestan ila dhagaysta. Saado cali iyo landcruiser
Reply ↓	Marunbaa	October 21, 2012 • 21:05	Haniyey waxan daawaday ninka la yidhaa Cabdi Qayb diid oo 1990s dhamaan gacanta ku dhigay Generalada Mareexaan ee walawayn ka dagaalamayey. Hadalkiisa iyo sida uu wax u waday wakhtigaa, jabhad la midihi ma jirin. Nin general Mareexana oo u goostay gumaad shicib ku leh gacantaydaad ku jirtaa waana lagu bad baadinayaa, wixii aad dad gumaadayna adiga iyo Ilaahay ha idiin dhaxayso. He was morally accountable that day but lost in the following Mooryaanic years.
Reply ↓	burco man	October 21, 2012 • 22:00	waar waar meeshii mafaq sh baa sooga shay oo siyadbare hogaaminayo wayaabe reerkan maxa dabadhigay cawa all wabsayd samaroon siyaad bare ayaa ka soo dhex baxay idin dawanaa anagu
Reply ↓	burco man	October 21, 2012 • 22:07	ANIGU WAXAN LEEYAHAY MALAMAN II KHAASKAHA JIHAAD XAQIIQAH IGUNA MUDAN NIN KAASNA AAN KUDUMIYAY……………….SNM¸.•*”"*•. waa 17 October Maalinta Shuhaddada SNM¸.•*”"*•.¸SNM
SNM¸.•*”"*•. ♥♥ ♥Xuska SNM Xusuus Mudan ♥ ♥ ♥¸.•*”"*•.¸SNM
Reply ↓	HanniMuufo	October 21, 2012 • 22:21	Marunbaa thanx bro,
Waxani waa logu talo galay in reerkan Hawiye sidani u dambayso qaar dhagar qabe yaal ahna waan lahayn weligeen sidii Cali iyo Caydiid ah. Laakin nin yo waad arki anagu afkeena waxanan waan jecelnahay wadankeena ahayn kama soo baxaan waana difacaynaa baan ku xejinaa kkk.
Dee inagii ayaa dhexdeni is ka haysano cadawga uun baa mar dhegta la inaloogu sheegay welina dee kama bixin oo dharaar walbo cadow uun baa noo soo yuucan kkkk.
Timacade filimkad waydisay wakaa Mr Kaluun. Oo runta iska sheegaya. http://www.youtube.com/watch?v=MUL6oMGi5Dc
Reply ↓	Carraale	October 22, 2012 • 00:51	M.r kaluun markuu ka hadlayao dawladdii SIyaad Barre runbuu ka sheegaya, markuuse ka hadlayo SNM, hebelo ayuu maldahayaa ama saacidaya, wax run ah ama run loo qaadan karo kama sheegin. SNM waxa ka mid ahaa oo ku jiray Dir Koonfgureed. Waxa ku jiray Hawiye. Waxa Ku jiray Ciise, Waxa ku jiray Gadabuursi. Waxa ku jiray Isaaq, haba u badnaadeene. Markaa Mudane Cismaan Kaluun, cajaaladda uu iska qabtay ama laga qabtay been laxaad badan ayuu sheegay . Sidiii dhabata ahayd ee wax u dhaceen ma wada sheegin. Qaybta kali ah , ee sax ah, ee uu sheegay waa ka qayb qaadashada dawladda Siyaad Baree iyo sifada isaga iyo raggii asaaggiis ahaa uga qayb qaateen. Waxba yaan ummadda Soomaaliyeed been lagu haasaawinin.
Waa walaalkiin Carraale oo idinkaga tagaaya isma wayno. Waa innoo mar danbe, iyo innagoo dhamanteen caafimaadqabna, balse laxaw iyo uurku taalo midna qabin.
Cajaladdan hoos ku xardhan waxa inoo soo gudbisay Walaasheen HaniMuufo,daawasho wacan:
Reply ↓	gudoon	October 22, 2012 • 01:16	siyaad bare ilahay ha u naxaristo once again baan leeyahay aniga hadii aan heli lahaa dowladii somaliyed ee hore waxay noqon laheed dream come true,siyaad bare wuxu ahaa madaxwayne qiimo badan wadankana jecel ofcourse xukun kana jecel lakiin inkastuu meesha ku raagay oo inu kursiga baneeyo ay aheed after 20 years hadan waxa ka daraa oo ka sii liitay kuwa cadowga somalia ee amxaro intay u tageen hub ka soo qaatay ee wadankoodi hooyo dumiyey madaxwayne waa la diidi karaa lakiin qarankeeni iyo wadankeeni in badan la dhisayey iyo magaaloyinkeeni qurxoona kuwa intay cadowga hub ka soo qateen dumiyey baa ka daraa siyaad 100 jeer , ma waxa intay hub soo qaateen ka bilaabay guryahoodi oo caruurti ku jirto oo duqaydii ku jirto ee gubay baa waliba waa lana dilay leh hooyadood habaryaradood bay dileen qaxiyen waliba way hadalayan,, siyaad waxa kaliya ee uu samayey waxay aheed wadanka ayuu ka difaacayey kuwaa lasoo adeegsaday bal hada hadii usa jabhad soo weerarto ma la iska daawan mise waa la karabashi, ofcourse waa la karbaashi siyaad wuu yara karbashay , way wada qaxeen kuwii soo galay iyo kuwadii aan dhiman ee xabadoodu ayna dilin, 3 sano iyagoo kadeedmay oo bakhtigu xalaal u yahay oo siyaad cagaha haysta ana soo noqono baa hawiyeh ku kacay siyaad sidasay idoor ku badbaadeen ,markaa ayaan waxba mujaahid la sheegan waxna maydin xoreen waxa kaliiya eed dumiseen waa guryihiini iyo magaalooyin somaliyed waxas markad adiga wax is yeesho laguma faano maalin la yiraado 17 october looma saymasto dhibta adiga kusoo gaadhay .. ilahow kacankii soo celi
Reply ↓	Carraale	October 22, 2012 • 02:06	“Maxaa kaa run ah”, walaashay Gudoonay?
” Maxaa kaa run ah”, waa magac barnaamij ka bixi jiray RTD-ga Djibouti,waa aan dalka aan jaarka nahay ee Jimhuuriyadda Djibout aan joogi jiray. Maanta ama Caawa waxaad isoo xasusiasay barnaamijkii maxaa kaa run ah.
Waxaan jelclaan lahaa inaad dib isugu yara noqto oo intaan lagu sixin aad adigu isa saxdo.
Gacaliso Gudoon Bilanay nabadeey!
Reply ↓	Timacade	October 22, 2012 • 01:37	Joogiwaa,
Aabahaa (aun) wuu ka mudanyahay if iyo akhiraba siyaad barre iyo cid kale toona. Aabaha haddii sidaa aad u sheegtay uu u dhintay dee wuu shaahiiday ee ma dhiman.
Qofka naftiisa u hura ee dhinta isagoo qof binuaadam ah badbaadinayaa waa ehelu khayr, waa wadaniyad heerka ugu sareeya, mana jirto wax la garab dhigi karaa. Mana jirto wax loogu abaal gudi karaa. You must be very proud, because I would be if that was my father.
Joogiwaayow, lama iibsan karo, la iskama yeelyeli karo, lamana amaahan karo wadaninmo. Aabaha warqad siyaad barre bixiyo uma baahana, isagaa ka mudan siyaad barre waxuuna istaahila in taalo loo dhiso. Waxaanu runtii ku tilmaamanyahay. Geesiga dhulkisa guusha u horseeda, geerida dishay geedkaa ha go,.
Reply ↓	joogiwaa	October 22, 2012 • 16:04	timacade
warqada siyaad bare qoray waxay ahayd cadayn
waxuu dalka iyo dadla u qabtay geesi dhintay
waxanse liqi kari waayay in caydayntii hada lagu sheego biladahii faqashta
hadii siiraanyo ama nin habar jeclo ahi intaad ila garanayso ila garan lahaa.tokayna naanaysta cusub iga dayn lahaa
dee anna sacabkuunbaa tumilaa
timacade waadku mahad santahay
waxaad ii soo gudbisay tallo nin wayn
waan kuu ogahay walaal
Reply ↓	Marunbaa	October 22, 2012 • 02:45	Hani adaa mudan balse fariin kalaan maanta kuu sidaa oo ah, raysal wasaaraha cusub ee somaliya kulankiisa ugu horeeya ee uu agaasimaha ku doortay, sawirada dadka ku geedaaman iyo qaab kooda bal ka faaloo oo. Mayihiin ciyaala beesteen kii aad sheegi jirtay mise waa koox meel kale laga soo jilaabay. Unuu rag jaad cun ka soo kacay uunbaan meesha ka arkay oo si ula daadsan. Waxay dhamaan u eeg yahiin xirsi tooriilahii Siilaanyo kkkkkkkkkk.
Reply ↓	HanniMuufo	October 22, 2012 • 04:28	Marunbaa,
Shaaciro waadba dhamaysaye kawaran!. Anuu Xirsi torilana ma garanayn waxan ka eegay google image lakin runtii kan murayadaha madow xidhani wuu u egyahay Mr Toorile apsence paint la yirahdo een meel hada kahor ku arkay gebigoodba u egyihiin. Aloow maxaa aduun is daba maray!.
Reply ↓	HanniMuufo	October 22, 2012 • 04:39	Correction absence painting…..
Reply ↓	Wali Ashma.	October 22, 2012 • 07:25	Salaam
Nin talinjiray markuu tago,waxa yimaad Nin aan talinjirin.
Qorigii uu Siyaad Bare u jeediyay xagaa iyo Ethopia ayay Ethopia ku soo jeedisay Somaliya.Qorigii wali sidii ayuu u dhacayaa Somalina sidii ayay wali u dhimanaysaa.1977 ilaa maanta oo ay tahay,2012,Somalidu maanli n kaliya kamay nasan Rasaasta dhacaysa.
Shaki kuma jiro inuu Siyaad ahaa Geesi,wuxuse shaki ku jiraa inay Somali yeelan doonto Geesi kale oo mar kale isku keena.
Siiraan wuxu wiilkiisa
Reply ↓	Wali Ashma.	October 22, 2012 • 08:42	Hawiyaha iyo Idoor waa 2 doqon.Midna Xamarbuu ku iibiyaa raashinka masaakiinta loo keeno,midna Hargisa ayuu xabaalaha ka faqaa.
Milgaha Dawladnimo meel ayay kaga dheceen,Somalina waxay u horseedeen,Aids.xanuuno aan la gharanayn,Sun dhulka lagu aaso,Hooho gaajootay,mid baraf dhexjoogta,mid aan garanyn luuqad oo cadow u jabtay iyo qaar ay ku dhxeen wax aan hore u dhcin.Kaaga darane 2 ban reer kamaba qasna oo Bakhaaro,ito makhaayadu bariss ka gu klariyo ma dhaafaan.
Guuldarada ay ku guuldaraysteen maamulka wadan inay qirtaan ayay ahayd,laakiin taasi way ka gaws adaygen.
Waar meesha u dhaafa Daroodkii,
koone ilaa koone wadanka xakumayay ee Somaliya ay ka mdi ahayd,hormoodka africa.
Ilaahy Janadii haka waraabiyo Siyaad Bare.
Waxa uu layn jiray,waxaa maanta wadanka laaqay ee sida
waraabayaasha midba uu dhinac goostay..
Kuwaa ayuu ka ilaalionjiray,wadankii ka dhigay meel lagu gurto sadaqada.oo ay untu dadka kui masruunfto.
Reply ↓	joogiwaa	October 22, 2012 • 15:18	marunbaa
farxadaydii shalay waxaad ka dhigtay meel aan jeclaa roob igu eri oo siyaad baraad dhabarka u saartay.waana nin istaahila in loo ooyo eebena hawnaxriisto laakiin
muxubadaydu ma dhaafsanayn wixii wanaagsanaayee soomaali ka dhintay oo aabahay ka mid ahaa iyo siday hada u qoqobantay
21ka aktoobarna waxa la xusi jiray daljika dahsoon iyo geesiga
hadayse doodu siyaad bare iskugu soo dhurantay
waxala sheeegay inuu yidhi waar saddex ninba
mid naftaydaan ka ilaaliyaa.midna umadaan ka ilaaliyaa
kakalena dalkaan kailaaliyaa
cigaal dalguu iibinayaa
caydiid anuu idilayaa
cabdilahi yusufna umaduu laynayaa
markaa sida hadalkiisa ka muuqata maga yaabaa inuu waayay
cid uu talo kaga tago
mase la arkay waxii uu sheegayay?
Reply ↓	Marunbaa	October 22, 2012 • 17:48	Joogiwaa, waxabayba u eegtahay in aan somali nin xigmad iyo xilqabtaba ilaah ka dhalin. Hadii aad sidaas aamin santahay dee wax aan ka sheekaysanaaba ma jiro. Burburka Somaliya siyaad baa ka masuul ahaa. Baaba a hooyooyinkana siyaad baa kow ka ahaa, hadimada cadaw soo hoos galayna Siyaad baa kow ka ahaa. Somali nin ka xun oo xumaan ka tagay isagaa kow ka ah. Kuwaad kor ku soo sheegtayna dhibtooday lahaayeen laakiin ta Afwayne marka la garab dhigo, iyaku waa xariir. Mid kaliya ayaan kugu diidanahay, ta cigaal ee dhulkuu iibinayey la yidhaa waxba kama jiraan, waxanan akhristay dooda labada dhinac oo midkastaa xaqiiqo raadis galay. Himilada cigaal fursad la fahmi waayey bay ahayd.
Reply ↓	joogiwaa	October 22, 2012 • 19:45	marunbaa horta fikirkaa cigaal ku raaciyay waxka sheegimaayo
laakiin cigaal kama ilka qaboobayn siyaad bare
waxaana cadaynaaya cigaal markuu ku jiray dagaalkii
garxajiska nin habar-awal oo weeran buu ahaa
waxaa isgoo nool looga dhisay toolo goobtii uu ku dilay 400 nin
maalintii uu rayaale magcaabay maalin kadib wuxu dooxa ganad ka soo faqay laf dad.
waxanan u malaynayaa inaan qudnadiisii dhagaysatay
isagoo reer hargaysa ka maslaxa ninkii uu shalay magcaabay
oo leh wuxuu galay ha eegina waxa uu qabanooyo eega
walaal mataabaa fursad luntay ah
mase aragtay meel siyaad bare 400 oonin i sa saaray oo laalo looga dhisay?
Reply ↓	hiildan	October 22, 2012 • 17:52	Waxad yeeshiin ku faana Guulaha Kacaanka Oktoobar: Somaliland miyay jiri lahayd kacaanka hortii?; Siilaanyo miyuu waligii noqon lahaa Madaxweyne, Rayaale miyuu noqon lahaa madaxweyne?, Cigaal miyuu noqon lahaa madaxweyne, SNM miyay jiri lahad?, Af-soomaligan quruxda badan miyaad qori kari laydeen?. Dee waxaasi oo dhami waa guulihii kacaanka laga dhaxlay, ee ku faana kacaanka.
Reply ↓	HanniMuufo	October 22, 2012 • 22:33	Hiilka,
See camal qalbi caruurnimadan, ma ogtahay in dowlada Siyad Bare ee Militery ga ahayd ay dishay erayga Democradic waxay horta daldashay oo dil qorsheysan ku samaysay Aun Mudane Abdi/Rashid Ali Sharmarke kadibna xukunka la wareegtay! Markii xigtayna Jeneral Abgalahay ku xejiyeen oo togteen!. Hadii runta la shegayo Somalia waxay aad u wanagsanayd kolkii Mudane Adan Cade si democradic ah xilka u gu wareeejiyey Mudane Rashid!. Arintana imikay soo yar nolanaysaa oo Shariifku wuxu xilka si nabada ugu wareejiyey Xasan Diindiin kkkkkkk. War bal aduu dib isu eeg waxa laga shegaya waxba ka jira oo is duqaynta ah!. Ani runti waxan aminsanahay hadad adigu madaxwayne ii noqoto in aad ka naxariis iyo dadal badnan lahayd odaygan cunsurkaa eed wad wado!. Dagalki 77 wuxuu irir Samale ku laayay ujedadiisu waxay ahayd Darood impare samee ee Amxaro nacayb kama ahayn!. Laakiin dee Ogadenki badankii baa Amxarada sharbada ka dhunkanayoo wuu ku guul daraysatay!.
Reply ↓	Marunbaa	October 23, 2012 • 05:14	Hiildaan, ma waxad rumaysayn tahay in Siyaad bare afsomaliga qoray. Dib ugu noqo 1950s iyo Bulaale Borama abwaankii, fanaankii la odhan jiray iyo Ruwaayadahii uu kaga qayb galay Paris. Kalmad kasta oo ol olaha marlay aad la soo boodi ku jirtaa waxay sidoo kale ku jirtay Ruwaayadahiisii ama majaajulooyinkiisii. Mala odhan karaa hadaba hadii ayna djibouti jirin afsomali maynaan qorneen. Waxankuu maldahayaa Siyaad Bare fikir u gaara oo uu la bad yimid ma jirin ee sidaan hore u idhi, wixii somali lahayd uunbuu ka sinaystay.